Ady amin’ny haromotana: 75 000 ny vaksiny haparitaka | NewsMada
Ady amin’ny haromotana: 75 000 ny vaksiny haparitaka
Nilaza ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana fa hisy maimaimpoana ny vaksiny faobe hatao amin’ny saka sy ny alike, hotanterahina manerana ny Nosy hiadiana amin’ny aretina haromotana.
Misy ny fiaraha-miasa amin’ny mpamatsy vola ka vaksiny 75.000 izay ho tonga amin’ny volana oktobra izao no ezahina haparitaka. Hisy, araka izany, ny fanentanana ireo mpiompy saka sy alika hanao vaksiny ireny biby ireny hiarovana ny fiarahamonina.
Iarahana amin’ny fikambanana iraisam-pirenena miady amin’ny aretina haromotana ity fanaovam-baksiny maimiampoana ny biby atahorana hamindra haromotana ity.
Eto Madagasikara, anisan’ny faritra ahitana ny trangana aretina haromotana ny any Alaotra Mangoro ary efa miitatra hatraty Antananarivo izany amin’izao fotoana izao, raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Fiompiana hatrany.
Tsy tokony hiandry ela ny olona iray voakaikitry ny alika na voarangotry ny saka fa tokony hanatona haingana ny dokotera. Sasana amin’ny savony ny faritra voarangotra na voakaikitra mandra-pahatonga any amin’ny toeram-pitsaboana.
Rehefa mahenika ny vatana manontolo ny aretina, tsy misy fanafana intsony fa tsy maintsy maty ny marary ka izay ny antony hanatonana haingana ny dokotera mba tsy hampihanaka ny tsimokaretina amin’ny vatana.